Kris Dzheriko, akungabazeki - ingane yamakhono eziningi kangaka. It is ikakhulukazi yaziwa emhlabeni njengoba omunye wrestlers yimpumelelo kunazo zonke emlandweni. Kodwa ngaphezu elwa ngayo njalo ithande umculo, ngakho kowezi-2000 ekuseni, afike wasungula khona iSikhungo band Fozzy. Kodwa lokho akuyona yonke: ku umbukiso WWE Kwembula ithalente oratorical eJeriko ke kusetshenziswa ngempumelelo e lavela emisakazweni nakumathelevishini. UChris futhi engumlobi, kuze kube manje, womathathu izincwadi zakhe ithandwa eside. Kungaba ongaziwa uma sijwayeleke yehlukene kaningi okubalwa ezinjalo hhayi wazama isandla sakhe ifilimu. Futhi ake Kris Dzheriko, ogama Filmography akuyona indawo ebanzi kangako, ongakabi abe inkanyezi wangempela esikrinini esikhulu, kodwa ngokuqinisekile ithelevishini yanqoba phakade.
Samuntu a isifiso enganginaso kusukela ebuntwaneni
Igama elinikeziwe kuye ngesikhathi sokuzalwa - Christopher Kit Irvayn. Ukuze ukhethe i-alias izinkanyezi ikusasa wrestling bathonya umlando yonke indawo yedolobha lasendulo okukhulunywa ngabo eBhayibhelini, eJeriko, ngoba wakhulela emkhayeni wamaKristu futhi indoda bayithanda kakhulu inkolo.
Kris Dzheriko wazalwa ngo-November 9, 1970 e-United States, edolobheni Manhasset eNew York State. Uyise, Ted Irvayn, kwaba NHL, ngakho umkhaya wathuthela eCanada, idolobha waseWinnipeg, lapho afike achitha khona esengumntwana nangesikhathi intsha, Christopher. Umfana washintsha izikole eziningi, kodwa namanje got aphakathi, ngemva - bese kuthi imfundo ephakeme. Anakho intatheli idiploma.
Lapho ngineminyaka engu-nambili, Canadian abasha wanquma umxhwele izindlela ezimbili - i-wrestling nomculo. Amakilasi wrestling laphefumulelwa Owen Hart, futhi kamuva esikoleni, "Hart Dungeon" futhi aqeqeshiwe iqhawe eziningi ngekusasa. Chris aseqala phambili lezemidlalo owawuse ngo-1990, impi yakhe yokuqala yaphela a draw. Ngasekuqaleni komsebenzi wakhe pokolesil emhlabeni, enza eziningi nemifelandawonye eYurophu, eMelika nase-Asia. Wayengumuntu ethandwa kakhulu eJapane, okuyinto eye yazuza eziningi abangane, ezifana Eddie Guerrero, uDina Malenko, nabanye.
Iphuzu olandelayo ekunqotshweni udumo emhlabeni baba-United States. Kris Dzheriko ovuthayo ngempumelelo ECW, kodwa isikhathi eside ayihlalanga khona - kakade 1996 usayine isivumelwano ne WCW, lapho wathola iziqu ezimbili: ithelevishini futhi phakathi isisindo isigaba. Kwakuphakathi nalesi sikhathi engasenathonya uChris wachaza ngokucacile kakhulu, futhi waba Intandokazi izilaleli.
Ngemva kweminyaka emithathu, Canadian wangena olubabazeka kakhulu emhlabeni lo mfelandawonye wrestling WWE. 9 Agasti 1999 Kris Dzheriko wafika iringi ngaphansi-alias y2j entsha. Wacela call of the itiye futhi wanquma ukubhekana naso sesihloko Intercontinental, ngoba ngangicabanga ukuthi owesifazane ingafanele ukugqoka isihloko iqhawe elikhulu, futhi ngeke kube. Kamuva naye ngezinye izikhathi eziningana elahlekile isihloko nezinye bomlilo futhi wambuyisela.
Ngo kowezi-2000, ngemva uchungechunge ukunqoba, kuhlanganise ekulweni Dwayne Johnson Rock, eJeriko iwine isihloko sokuqala izimangalo Champion WWF. izimpi ezalandela zalwelwa ngempumelelo obuhlukahlukene, futhi ngo-2005, wrestling ethandwa ushiye WWE.
Ekuqaleni entsha yeminyaka kwaba ukugcwaliseka kwesinye futhi project, mayelana nokuthi iziphi izinhlelo eyakhula dream Kris Dzheriko. Umculo bekulokhu kuyingxenye yokuphila kwakhe, ngokusho kakhulu ophathelene nabantu baseCanada. Akalokothi baliphonsa, kodwa musa ulethe ezingeni okhokhelwayo. Kuze wahlangana Backstage nelungu WWE band Stuck Mojo, umlandeli wayengumuntu, guitarist Rich Lesigceme. Lo mculi wayeneminyaka fan of Chris, phakathi kwezinye izinto, base okuthandwa ezivamile zomculo banquma ukuzama ukudlala ndawonye.
Ngemva kokulimala esiyingini (iqakala zaseJeriko olimele) nomsubathi isikhathi, waze wanikela ngeNdodana yakhe iphrojekthi entsha ngokuphelele - ikhava band Fozzy Osbourne, kamuva yehliswa igama Fozzy. Ngaphezu Chris futhi Rich ethimbeni yadibana ngamanye amalungu Stuck Mojo - Dan Dryden noFrank Fontser kanye Ryan Mallam. Nobuciko, engasenathonya futhi omuhle kakhulu iqembu Canadian vocal enikeziwe esihle.
heavy metal egazini
Ngenxa yokuthi Fozzy ekuqaleni idlalwe kuphela nesembozo hits abadumile, basungula nganekwane ukuvelela phakathi kontanga amaqembu afanayo. Khulumela ke wukuthi Fozzy iminyaka engaphezu kwengu-20 wachitha eJapane, futhi ngemva kokubuyela ekhaya, wathola ukuthi eziningi amaqembu zithandwa, ukweba ingoma yabo. Ngemva kokususa ividiyo kwale nganekwane uyisebenzise ku-MTV, Fozzy amaqembu ukuqinisekisa ukunakekela DEBUT albhamu wabo wokuzidela osesikhundleni. Esikhathini yesibili albhamu kwenzekile, wadedelwa ngo-2002, kwanqunywa, ngaphezu ukumboza iculo, izingoma futhi izingoma zabo. Ngenkathi band kuyanda, ngezithako zawo zase zishintshile izikhathi eziningana, kodwa abasunguli abahlanganyeli njalo.
Iculo Chris eJeriko nebutho lakhe ngokuthi Enemy, eyakhululwa ngokuqhubekayo njengenkathi eyodwa ehlukile ngo-2004, kuye kwahlanganiswa ngisho ezamukelwe ngu WWE. I-albhamu yesithathu ngo-2005 All That Remains isibe ithimba ayo agcwele indalo, usephumile ikhava izinguqulo kwithrekhi yasekuqaleni. Ngenxa ukubuya inkanyezi eyinhloko iqembu ku-albhamu indandatho studio elilandelayo wadedelwa kuphela eminyakeni emihlanu emva.
Conquest izihloko ezintsha
Canadian eyanquma azibonakalise kwenye insimu. Ukuba inkanyezi ezikrinini TV ukukhombisa WWE kanye WWF le wrestling futhi umculi umcabango yokuba umdlali. Wakhe Isivivinyo sokuqala - TV ifilimu "Izitha" ka 2006. Njengazo zonke izinhlelo odlule, kubuye kube yimpumelelo. Kodwa namuhla akuyona eminingi, okuyinto inkanyezi Kris Dzheriko. amabhayisikobho akhe: the comedy "MacGruber" Izinto ezesabekayo "FEMA Alibino" futhi Thriller "Inkathi ubudlelwane"; uchungechunge lapho kungabonwa: Z Rock, «e cube", "U-Aroni Stone" nemidlalo ye-TV, "Kodwa Ngingumfana Kris Dzheriko"!.
Ngo-2007, ukubuya kwesigijimi wrestling abadumile WWE, lapho izilaleli kulo lonke izwe sakara amavidiyo amafishane e isitayela "The Matrix", libukeka i-TV lapho commercial breaks, zibizwe imibhalo waseBhayibhelini, futhi le nkulumo ethi "The kwesibili" futhi 'Uyosindisa kithi " . Phakathi kwenkulumo, lamanje WWE iqhawe kuyinto ibinzana efanayo uvele kwi show. Ngo 2007-2009 wathatha ingxenye ezimpini eziningi kuzihloko ahlukahlukene, esagcina saziwa isikhathi lesishiyagalolunye Intercontinental Champion. Kris Dzheriko futhi ngokuphindaphindiwe won ithimba izimpi, ngokukhethekile, ngo-2009 nango ngonyaka 2010. Canadian ukubeka ultimatum sakhe: noma enqoba isicoco ngesikhathi PPV Night wompetha, noma ushiye WWE. Umyeni wakhe wasigcina isithembiso sakhe - ukuba balahlekelwa impi futhi walimala, washiya ngenhlonipho, sebengenile ukuvakasha nebhendi yakhe.
Ngemva kokululama ekulimaleni, we-wrestling ovelele wanquma ukubuyela umbukiso futhi benza kanjalo, njengenjwayelo, kuyinto ehluke esiyingqayizivele. It kabusha wethula amavidiyo ongaziwa ku-TV ekwindla ka-2011, manje okuyinto iyavela izingane amagama angaqondakali. Abalandelayo ukubukeka ongavamile Chris ngoJanuwari 2012 kwi WWE show, lapho wathula wahamba, futhi ukulwa lokuqala ngemva kokubuyela akwenza elahlekile, ngoba ukunqoba kwakhe kwakuyoba indlela esobala kakhulu. Ngawo lowo nyaka e izimpi eziningana, kuhlanganise show "WrestleMania" futhi "Imithetho Extreme", Kris Dzheriko ihluleke Punk. Futhi ngo-2013 ayenakho ukuhilizisana eziningana nge Fandango, futhi ahlukahlukene empumelelo.
Uma "WrestleMania" walahlekelwa baseCanada, i- "Imithetho Extreme" Weza out onqobile. Isikhashana ngemva kwalokho futhi lahlanganyela kuleli indandatho yakhe lwaleli-isitha punk kanye futhi amnika sona, futhi ngemva ukunqotshwa kwenzekeni ezimbalwa kwasani, kuhlanganise empini sesihloko interkontinentalnyyy. Ngo-2014, u-Chris ibuyisela futhi uyaqhubeka enza ngempumelelo WWE kanye WWF namuhla. Phakathi wrestling yakhe umsebenzi ngakwazi abe umnini zezihloko eminingi nezindondo, yena eziyisishiyagalolunye esigcwele Intercontinental Champion futhi owokuqala izimangalo Champion emlandweni WWE, futhi ngeke ahlale khona.
Kuze kube manje, Chris eJeriko ngobuningi imisebenzi, futhi akucaci nguye ophethe kanjani. umlingisi Canadian, wrestling, umculi waba umlobi, ukukhulula amaningi njengoba ezintathu izincwadi. He is iqhawe uchungechunge imidlalo ye-computer. Waphinde waqala hockey, lapho kwabonisa imiphumela Akumangalisi okuhle, akusona isimanga, ngoba ifa lomndeni. Kusukela ngo-2005, wayeqhuba show sakhe emsakazweni. Kusukela ngo-2010, i-band Chris Fozzy ukhiphe ama-albhamu amathathu ngaphezulu baqhubeka nemisebenzi yakhe zomculo. Okwamanje uhlala Florida nomkakhe uJessica Lee Lockhart nezingane ezintathu.
Ama-movie ne Hyu Dzhekmanom: okuhamba phambili ohlwini, izindima, izigcawu
Comedy "Orphan Kazan ': abalingisi, izindima, sakhiwo isifinyezo
Paul Walker Filmography umlingisi. Ama-movie ne uPawulu Walker
Filmography Tom Hardy (Tom Hardy). Ukuqeqeshwa, ukukhula kanye ngcono njengoba kumdlali
Ukungabaza - ngokwalokho oyikho: umqondo touch horror movie noma reception?
Indlela esiphatha ngayo pneumonia? Amacebo eziwusizo
Kuvuleke amathayili ngezandla zabo: indlela uwubeke
Crispy inyama chops in Batter
Ubuntwana. Ukwakhiwa kwabafundi besikole
Incwadi Capital HTML futhi CSS